Xaqiijinta Visa Raac Tallaabooyinka 3 ee riyadaada Nolosha UAE
Safaaradda Rabbiga ma UAE oggolaanshahaaga fiisada dalab? Hubi Hadda!
Xaqiijinta Visa - Waxaan jeclaan lahayn inaan kuu sheegno inaad ku guuleysatay nolol cusub gudaha Dubai!
Waxaad Ku Guulaysatay Xaqiijinta Visa Dubai!
Hubi u-qalmitaankaaga fiisaha Dubai!
Waxaan u baahanahay inaan la safro Qoyska
Waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad la dejiso Qoyskaaga oo aado Dubai
Gobol ama gobol
Koodhka boostada / ZIP
Nuqul ka mid ah Boggaaga Aqoonsiga Baasaboorada (Sawir Gacanta)
Lambarkaaga Aqoonsiga (Baasaboor ama laysanka Baasaboorka)
Fadlan qor Lambarka kaliya
Xulo Meesha kuugu habboon:
Bariga DhexeEuropeUnited StatesCanada
Adeegyada Visa (fadlan dooro mid ka mid xulashooyinka soo socda)
$ 29.99 Visa + Raadinta Shaqada gudahood 60 maalmood + Dammaanad Lacag celin Dammaanad ah
$ 19.99 Visa Codsi + Dammaanad Shaqo
$ 9.99 Visa Codsiga + Xaqiijinta
Waxaa lagaa xaqiijin doonaa Visa iyo Shaqada Imaaraatka Carabta.
* Fadlan dhagsii Xiga oo cusboonaysiiso faahfaahintaada macluumaadka lacag bixinta ee u qalmashada Visa & Baasaboor. Adiga, Adiga, ayaa lagu hubin doonaa Visa iyo Shaqada Imaaraadka Carabta Emirates.
Tusaale sawirka baasaboorkaaga hore (Baasaboor)
Tusaale Visa la soo saaray United Arab Emirates
Xaqiijinta Visa ee Dubai
Dib u dejinta Dubai - Maxay Tahay?
Hadda: Ka dib markay dib u eegaan faahfaahintaada kooxdeena ayaa kuu soo diri doonta macluumaad dheeri ah oo Email ah, Sidaa darteed, fadlan hubso inaad maalin walba ka hubiso emaylkaaga wixii intaa ka badan. macluumaadka dib u dejinta. Kahor intaadan sii wadin inaad hubiso inaad kudartay dhamaan faahfaahintaada shabakada shirkada. Waxaa jira kaliya talaabooyin 3 ah oo ay tahay inaad raacdo, xaqiijiso astaantaada, geliso CV ka dibna waxaad u baahan tahay inaad hubiso inaad caymis ku geli doonto shaqada Imaaraadka Carabta. Dhanka togan, waxaan halkan u joognaa inaan kaa caawino inaad u duulo Dubai iyo waxaan ka badan nahay 100% hubin inaad ku degtid Dubai.
Fadlan Hubi E-maylkaaga!
Macluumaadka Baasaboorka UAE
Waxaan si xushmad leh u qiraynaa macluumaadka aan kaa helnay adiga Shirkadda Dubai City loogu talagalay Bakhtiyaanasiibka Visa ee Imaaraadka.